အတွင်းလူ၏စွမ်းအား | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 25, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်က၊ Cisco မှတဆင့်အချို့ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တွေ့ဆုံခဲ့သည် ကြေးနန်း ထိုသို့အံ့သြဖွယ်၏တိုတောင်းသောဘာမျှဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ပြည့်ဝစုံလင်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာတန်ဖိုးရှိသည်။ Cisco မှရှေးရှေးများသည်သဘောတူ။ ၎င်းကိုထုတ်ပစ်လိုက်သည် In- လူတစ် ဦး အစည်းအဝေးများ၏တန်ခိုးအပေါ် infographic.
ဖြန့်ဝေထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်များသည်အဖွဲ့အစည်းများသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဝေးကွာသောအကွာအဝေးများမှကွဲလွဲနေသောဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုပုံကိုပြောင်းလဲသွားစေသည်။ Cisco မှကမကထပြုသည့် The Economist Intelligence Unit မှပြုလုပ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်တမ်းတစ်ခုအရစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ၏သဘောထားအပေါ်အကဲဖြတ်ချက် ၈၆၂ ခုရှိသည် လူပုဂ္ဂိုလ်အစည်းအဝေးများ၏တန်ဖိုးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ် ၃၀ ကျော်အပေါ်သူတို့၏သက်ရောက်မှုများ။ ဒီတော့ဘာစီရင်ချက်ချလဲ။ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆက်သွယ်ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်အတိုင်းအစွမ်းထက်သလား။
အဆိုပါ infographic တစ် ဦး ထံမှရလဒ်များကိုကိုယ်စားပြုတယ် The Economist Intelligence Unit မှကောက်ယူခဲ့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်တမ်းကိုCisco မှကမကထပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေးများ၏တန်ဖိုးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ် ၃၀ ကျော်အပေါ်သူတို့၏သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ၏သဘောထား ၈၆၂ ခုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
Tags: Ciscoဆက်သွယ်ရေးလူတစ် ဦးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများနည်းပညာကြေးနန်း
ဧပြီ 25, 2012 မှာ 8: 14 pm တွင်
ဂရိတ်အမှတ် Doug! ဤသည်ငါမိန်းကလေးကင်းထောက် cookies များကိုငြင်းပယ်ဘယ်တော့မှအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါသည်:) ။
ဤအယူအဆသည် Guy Kawasaki ၏ဝိဇ္ဇာအတတ် (၄) တိုင်နှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်အားကြီးမားသော်လည်းသင်ကနှစ်သက်ဖွယ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသူ၊ ကွဲပြားခြားနားသူဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။